တူရင် - အီတလီ၏ပုခက်ကြီးဖြစ်သောမြောက်ပိုင်း၏အံ့ဖွယ်တစ်ခုဖြစ်သည် ခရီးသွားသတင်း
လူးဝစ် Martinez | | Getaways ဥရောပ, ကြည့်ဖို့ဘာလဲ, ခရီးသွား
မြောက်ဘက်တွင်အဲလ်ပ်တောင်ခြေတွင်တည်ရှိသောတူရင်မြို့သည်အီတလီနိုင်ငံတွင်အရေးအပါဆုံးဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်စက်မှုနှင့်စီးပွားရေးအင်အားအရသော်လည်းကောင်းတိုင်းပြည်၏သမိုင်းတွင်၎င်းနှင့်သက်ဆိုင်မှုကြောင့်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် Piedmont ဒေသ၏မြို့တော်ဖြစ်သည် အီတလီပေါင်းစည်းမှု ၁၉ ရာစုတွင် Savoy မှဘုရင် Victor Emmanuel II နှင့်ဝန်ကြီးချုပ် Cavour တို့ ဦး ဆောင်ခဲ့သည်။
ထို့ကြောင့်တူရင်သည်ရှည်လျားသောသမိုင်းကြောင်းရှိပြီးအထိမ်းအမှတ်အဆောက်အအုံများစွာတွင်ထင်ဟပ်ပြသခဲ့သည် Alpine ရှုခင်းများ ထိုသို့ကြွယ်ဝသော gastronomy ရှိပါတယ်။ သင်ဤအရာကိုလည်ပတ်လိုပါကကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူသွားရန်ကျွန်ုပ်တို့ဖိတ်ခေါ်ပါသည်။
1.1 San Juan Bautista ၏ဘုရားရှိခိုးကျောင်း
1.2 အဆိုပါမှဲ့ Antonelliana, တူရင်၏သင်္ကေတ
1.3 အဆိုပါ Sabaudas Residences
1.3.2 Madama နန်းတော်
1.3.3 Carignano နန်းတော်
1.4 Superga ၏ Basilica
2 Turinese gastronomy
Piedmontese မြို့ကိုမွေးဖွားခဲ့သည် XNUMXst ရာစု ရောမစခန်းကနေငါတို့ခေတ်၏။ ပြီးတော့သမိုင်းတစ်လျှောက်မှာheritageရာမအမွေအနှစ်ကိုစွန့်ခွာခဲ့ကြသောရှုမြင်ချက်အမျိုးမျိုးကိုခံစားခဲ့ရတယ်။ သင်တူရင်၌သင်လုပ်ရမည်လိုအပ်သောလည်ပတ်မှုအချို့မှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
San Juan Bautista ၏ဘုရားရှိခိုးကျောင်း
၁၅ ရာစုတွင်တည်ဆောက်ခဲ့သော၎င်းသည် Canon များ၏ဓားစာခံများကိုတုံ့ပြန်သည် အီတလီ Renaissance။ ၎င်း၏အဖြူရောင်စကျင်ကျောက်မျက်နှာစာနှင့်ကြီးမားသောရှစ်ထောင့်အမိုးခုံးထွက်မတ်တပ်ရပ်။ ၎င်း၏အစီအစဉ်တွင်ကြီးမားသော transept အားဖြင့်ကူးသုံး naves နှင့်နှစ်ဖက်စလုံးမှာ Chapel ။
သို့သော်ဖြစ်ကောင်းဘုရားရှိခိုးကျောင်းများ၏မီးမောင်းထိုးပြသောကြောင့်ကျော်ကြားအိမ်များသောကွောငျ့ဖွစျသညျ သန့်ရှင်းသော Shroudဘုရားကျောင်းယေရှုခရစ်အားဖြင့်ဝတ်ဆင်သည့်အရေခွံစဉ်းစားသော။ အထူးသဖြင့်၎င်းကိုဗိသုကာပညာ၏လက်ရာတစ်ခုနောက်ဆက်တွဲချာ့ချ်တွင်တွေ့ရှိရသည် Guarino Guarini နေရာချထားပုံ သင်ဘာတွေလည်ပတ်နိုင်သလဲ
အဆိုပါမှဲ့ Antonelliana, တူရင်၏သင်္ကေတ
ဆယ်စုနှစ်များစွာအတွင်းမြို့၏အမြင့်ဆုံးအဆောက်အအုံဖြစ်ပြီးအမြင့်တစ်ရာ့ခြောက်ဆယ်အမြင့်ရှိခဲ့သောကြောင့်၎င်းသည်တူရင်၏အထင်ကရသင်္ကေတတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါဟာဗိသုကာကတည်ဆောက်ခဲ့သည် Alessandro Antonelli XNUMX ရာစုအမျိုးစုံရ၏ Canon အောက်ပါ (ဤအရပ်မှ၎င်း၏အမည်) ။ ဤအကြောင်းကြောင့်၎င်းသည်ထူးခြားသောအသွင်အပြင်တစ်ခုရှိပြီးထိပ်တွင် quadrangular အမိုးခုံးကြီးရှိသည်။
အဆိုပါ Sabaudas Residences
သူတို့ကဒီနာမည်ရတယ် Savoy ၏တော်ဝင်အိမ်၏နန်းတော်များ အရာမြို့တလျှောက်လုံးနှင့် Piedmont တစ်လျှောက်လုံးတွေ့ရှိရသည်။ အစုသည် ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ် ထိုအဆောက်အ ဦး များအနက်အနည်းဆုံးအောက်ပါသို့သင်လည်ပတ်ရမည်။
သငျသညျအထူးသလူကြိုက်များအတွက်, တူရင်၏စိတ်နှလုံးထဲမှာတွေ့လိမ့်မည် ရဲတိုက်။ ၎င်းသည်ဗိသုကာပုံစံသုံးမျိုးဖြစ်သည့် Baroque, Neoclassical နှင့် Rococo ။ ဒါ့အပြင်အဆောက်အ ဦး ၏, သင်ကြည့်ရှုရန်ရှိသည် တော်ဝင်ပန်းခြံ၏ဥယျာဉ်များ နှင့်ဖော်ပြထားသောစတုရန်းထဲမှာ စန်း Lorenzo ၏ဘုရားကျောင်း ၎င်း၏အံ့မခန်း Octagon ခုံးနှင့်အတူ။ အလားတူပင်နန်းတော်အတွင်း၌အထင်ကရနေရာများဖြင့်အလှဆင်ထားသောအလှဆင်ထားသောအခန်းများကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။
၎င်းသည် Plaza del Castillo တွင်တည်ရှိပြီးအံ့သြဖွယ်ကောင်းသောအဆောက်အအုံတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကမတူကွဲပြားတဲ့အပိုင်းနှစ်ပိုင်းပါဝင်တယ်။ အနောက်ဘက်တွင်အလယ်ခေတ်ရဲတိုက်၏ပုံပန်းသဏ္ainsာန်ကိုဆက်လက်ထိန်းထားနေစဉ်alရာမအမိန့်၏ Canon များအတိုင်း လိုက်၍ ရှေ့တန်းသည်အထင်ကြီးစရာဖြစ်သည်။ အတွင်းပိုင်း, သင်လည်းသွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ် ရှေးဟောင်းအနုပညာမြူနီစီပယ်ပြတိုက်.
၎င်းကို Turin ၏ဗိသုကာကြီးဖြစ်သော Guarino Guarini မှတည်ဆောက်ခဲ့ပြီး၎င်းသည်ကျွန်တော်တို့ကိုအခြားမက်စ်နာကဲ့သို့သောအခြားအီတလီမြို့များတွင်အလုပ်လုပ်စေခဲ့သည်။ Verona နှင့်အချို့သောဥရောပမြို့တော်များဖြစ်သောပါရီသို့မဟုတ်လစ္စဘွန်း၌တည်၏။ ဒါဟာလက်ရှိတည်ရှိသောလှပသောအဆောက်အ ဦး ဖြစ်ပါတယ် အဆိုပါ Risorgimento ၏အမျိုးသားပြတိုက်, အီတလီ၏စည်းလုံးညီညွတ်ရေး၏လုပ်ငန်းစဉ်ထံအပ်နှံ။
Superga ၏ Basilica
မြို့အနီးရှိတောင်ကုန်းပေါ်တွင်တည်ရှိပြီး၎င်းသည်ဖိလစ်ပိုဂျူဗရာရာ၏လက်ရာဖြစ်ပြီး ၁၈ ရာစု၏ဂန္ထဝင်ဝါဒကိုကြည့်။ Baroque တွင်ပါဝင်သည်။ ဒါဟာအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်သောကြောင့်၎င်းသည်လည်းသင်္ကေတဖြစ်ပါတယ် Savoy ၏အိမ်၏ရှငျဘုရငျ၏ဂူ.
၎င်းသည်အီတလီမြို့တွင်အကြီးဆုံးနှင့်အကျော်ကြားဆုံးဖြစ်သည်။ ၎င်းကို ၁၆၃၈ ခုနှစ်တွင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး San Carlos Borromeo သို့သန့်ရှင်းစေခဲ့သည်။ ၎င်းတွင်သူတော်စင်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းသည်ထင်ရှားသည် Santa Cristina'sManuel Filiberto de Saboya ထံအပ်နှံထားသောမြင်းစီးရုပ်ထုကြီး။ အကယ်၍ သင်လည်ပတ်လျှင်၎င်း၏နာမည်ကျော်ကြားသူတစ် ဦး ကိုမလွတ်ပါစေနှင့် ဆိုင်များ, ပညာတတ်များနှင့်နိုင်ငံရေးသမားများအဘို့အအစည်းအဝေးမှတ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ၎င်းတို့အနက် Torino နှင့် the တို့ဖြစ်သည် အလွှာ၊, အီတလီတစ်လျှောက်လုံးကျော်ကြား။
တူရင်သည်၎င်း၏ပြတိုက်များစွာအတွက်လည်းလူသိများသည်။ အသင့်တော်ဆုံးတစ်ခုမှာအီဂျစ်ဖြစ်သည်။ အဲဒါထဲမှာပါ သိပ္ပံအကယ်ဒမီ၏နန်းတော် ကမ္ဘာပေါ်တွင်အီဂျစ်ရှေးဟောင်းသမိုင်းဝင်အရေးအခင်းများအနက်တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်ပြီးကိုင်ရိုပြတိုက်ပြီးလျှင်ဒုတိယဖြစ်သည်။
တူနီးရှားအစားအစာများတွင်အသား၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့်ဒိန်ခဲအချို့အပြင်အီတလီတစ်နိုင်ငံလုံးရှိပုံမှန်ခေါက်ဆွဲများသည်အလွန်ထင်ရှားသောအခန်းကဏ္ have မှပါ ၀ င်သည်။ သို့သော်ထူးဆန်းသည်မှာ၎င်း၏အကျော်ကြားဆုံးဟင်းလျာများတွင်မမျှော်လင့်သောပါဝင်ပစ္စည်းတစ်ခုရှိသည်။ ကျောက်ချဉ်.
သူတို့အားပုံမှန်ဟင်းလျာများတို့တွင် Bagna Cauda, ကြက်သွန်ဖြူ, သံလွင်ဆီနှင့်တိကျစွာ, ကျောက်ချစေးတွေအများကြီးနဲ့လုပ်ထားတဲ့ငံပြာရည်။ အချို့သောဟင်းသီးဟင်းရွက်များနှင့်အတူပူရန်အအေးခံသည်။ ထို့အပြင်မြို့၏ပုံမှန်သည် Vitello tonnato ကြက်ဥအကာများ၊ အံမှုန့်များ၊ တူနာငါးများနှင့်ကျောက်ချောင်းများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောဆော့စ်နှင့်ထန်းထားခြင်း။
သင်ကြိုးစားရမည့်အခြားဟင်းလျာများမှာ ကုန်ကြမ်းအသား all'Albese သို့မဟုတ် ကြော်ရောထွေး turinese။ ၎င်းသည်ပန်းသီး၊ ချောကလက်သို့မဟုတ်ပြောင်းစေ့ကဲ့သို့သောအစားအစာအမျိုးအစားများနှင့်ရောနှောထားသောတိရစ္ဆာန်အသားများပါဝင်သောကြောင့်၎င်းသည်အရသာအားလုံးနှင့်မသင့်တော်ပါ။
အချိုပွဲသည်ကျနော်တို့အကြံပြုပါသည် အစိမ်းရောင် tomini, ငံပြာရည်နှင့်အတူတာဝန်ထမ်းဆောင်သောဒိန်ခဲနှင့် ပိုက်ဆံကြက်ဥ၊ သကြား၊ နို့၊ ရမ်နှင့်ကိုကိုးများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောအရသာရှိသော pudding ဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုပူသို့မဟုတ်ရေခဲမုန့်ပုံစံဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးသေးငယ်သောဗာဒံကင်များနှင့်တွဲဖက်ထားသည်။
အထူးဖော်ပြချက်ထိုက်တန်ပါတယ် ပုသိမ်အထူးသဖြင့် Piedmont တွင်များသောအားဖြင့်အဖြူ၊ အဖြူများသည်မည်သည့်နည်းနှင့်မဆိုအစာစားသည်။ တဖန်သင်တို့ဒေသတွင်းနှင့်ထင်ရှားတဲ့သောအကြားအလွန်ထင်ရှားတဲ့ဝိုင်, ကြိုးစားသင့်ပါတယ် အဆိုပါ Barolo.
အီတလီမှာလေဆိပ်ရှိတယ် Turin-Caselle ၏, အရာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေယာဉ်ခရီးစဉ်ရောက်ရှိ။ ဘူတာရုံများစွာကိုလည်းပိုင်ဆိုင်သည်။ ဤအရာတို့တွင်အရေးအကြီးဆုံးဖြစ်သည် Porta Nuovaမြောက်ဘက်မှလာသည့်ရထားများရောက်လာသည် လမ်းများမူကားပြင်သစ်မှသင့်အားတူရင်သို့ခေါ်ဆောင်သွားသည် A32 နှင့် A5 တို့ဖြစ်သည်, Aosta ချိုင့်ဝှမ်းဖြတ်သန်းသော။
မြို့ထဲကိုရောက်တာနဲ့မင်းဝင်လို့ရပြီ မက်ထရို, လိုင်းနှစ်ခုရှိပြီးယာဉ်မောင်းမပါပဲ၊ ဘတ်စ်ကား၎င်း၏ရပ်ကွက်အားလုံးဆက်သွယ်သောမော်တော်ယာဉ်များနှင့်အတူ။
နိဂုံးချုပ်အနေဖြင့်တူရင်သည်အီတလီ၏အံ့ဖွယ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သမိုင်းဝင်ရိုးရာအစဉ်အလာအရယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်များနှင့်ပြည့်စုံစွာတည်ရှိပြီး၎င်းသည်သင့်အားမြောက်မြားစွာသောအထိမ်းအမှတ်အဆောက်အအုံများနှင့်ပြတိုက်များအပြင်လှပသောသဘာဝနေရာများ၊ သင်ဒီကိုလာဝံ့သလား။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခရီးသွားသတင်း » ခရီးသွား » ကြည့်ဖို့ဘာလဲ » တူရင်